Momba anay - Yongguang Line Equipment Co., Ltd.
HO HITANAO HEBEI Yongguang
HEBEI YONGGUANG LINE EQUIPMENT CO., LTD. dia orinasa teknolojia avo lenta manokana amin'ny famokarana, R&D ary varotra. Ny toerana misy an'i Yongguang dia ao amin'ny "Renivohitra herinaratra" malaza any Chine-Yongnian, akaikin'ny lalana 107 an'ny zotra, seranam-piaramanidina Handan ary ny gara.
Ny orinasa dia manana ekipa mahery vaika, asa tanana mandroso, fitaovana fanaraha-maso feno.
Ny vokarintsika dia nandalo fitsapana avy amin'ny Labana Fitting Test CECP's Power Fitting Test. Indostrian'ny herinaratra herinaratra- Toeram-panadinana kalitao kalitao elektrika ary Xi'an HV Research Institute. Ny kalitao azo antoka sy ny fahazoana tsara ny vokatra dia nahazo laza tsara avy amin'ny tsena anatiny sy any ivelany. Ankoatr'izay, nandalo ny taratasy fanamarinana CE isika, rafitra ISO 9001, miaraka amin'ny vokatra hatramin'ny ambaratonga firenena mandroso eropeana sy amerikana sasany.
Ny vokatra avy any amintsika dia aondrana any Azia, Oseania, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo Atsinanana, Afrika sns.
Miaraka amin'ny fitantanana orinasa orinasa mahazatra, ny fomba fiasa mety tsara sy ny serivisy aorian'ny varotra, ny fanavaozana mitohy, dia mahatonga ny orinasanay ho tonga iray amin'ireo mety hahomby sy mety ho fanavaozana. Ny orinasa dia mitazona ny foto-kevitra momba ny "kalitao dia ny fiainana, ny fototra no laza", manome ny mpanjifa vokatra manana kalitao sy ny serivisy mahafa-po.
Raisinay am-pitiavana ireo namana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao mba hiresaka momba ny orinasa sy hiara-hiasa aminay ho an'ny fampandrosoana an-tànana manerantany!